အစားအသောကျက မြိုးပှားမှုကို ဘယျလိုအကြိုးသကျရောကျသလဲ? သငျဘာတှသေိထားသငျ့သလဲ? - Lifestyle Myanmar
အစားအသောကျက မြိုးပှားမှုကို ဘယျလိုအကြိုးသကျရောကျသလဲ? သငျဘာတှသေိထားသငျ့သလဲ?
ကနျြးမာတဲ့ လူနမှေုပုံစံလိုခငျြရငျ သငျ့ဘဝမှာ အစားအသောကျကောငျးက အရေးပါတဲ့ အစိတျအပိုငျးဖွဈသငျ့ပါတယျ။ ကနျြးမာသော အလအေ့ထမြားက အမြိုးသားနှငျ့ အမြိုးသမီး နှဈဦးစလုံးအတှကျ ကလေးလိုခငျြလာတဲ့အခါမှာ ပိုပွီးအရေးကွီးလာပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အစားအသောကျက မြိုးပှားမှုကို ဘယျလို အကြိုးသကျရောကျစနေိုငျသလဲ? ဆိုတာသိရှိစဖေို့ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
အစားအသောကျက အမြိုးသမီးမှာ မြိုးပှားမှုကို ဘယျလို သကျရောကျစသေလဲ?
အဝလှနျခွငျးက မြိုးမပှားမှုကို ဖွဈစနေိငျတဲ့ ကနျြးမာရေးပွဿနာဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ကယျလိုရီစားသုံးမှု အာဟာရလြှော့နညျးခွငျးတာကလညျး ကိုယျဝနျဆောငျနိုငျစှမျးကို လြော့ကစြပေါတယျ။ ကိစ်စနှဈခုစလုံးမှာ သငျ့ရာသီစကျဝနျးဟာ ကနျြးမာစှာ မြိုးဥထုတျလုပျခွငျးကို သကျရောကျစတေဲ့အဖွဈသို့ ပွောငျးလဲသှားပါတယျ။
မှနျကနျတဲ့ အာဟာရစားသုံးမှုက သန်ဓသေားကနျြးမာစှာ ဖှံ့ဖွိုးမှုနှငျ့ ကနျြးမာသနျစှမျးတဲ့ ကလးမှေးဖှားလာဖို့ သခြောစပေါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ကနျြးမာသော အစားအသောကျမှတဆငျ့ မိခငျနှငျ့ကလေးအတှကျ ကနျြးမာရေးပွဿနာမြားကို ရှောငျကွဉျနိုငျပါတယျ။ ဒါကကိုယျဝနျဆောငျ ဘယျအဆငျ့မှာမဆို ကိုယျဝနျပကျြကနြိုငျခွကေို လြော့နညျးစပေါတယျ။
အစားအသောကျက အမြိုးသားမှာ မြိုးပှားမှုကို ဘယျလိုသကျရောကျစသေလဲ?
အမြိုးသားမှာ အစားအသောကျက မြိုးပှားမှုကို ကောငျးစှာသကျရောကျစပေါတယျ။ သုတျရညျရဲ့အရညျအသှေးက အာဟာရမြှတမှုနှငျ့အတူ တိုးတတျလာစနေိုငျပါတယျ၊ မြိုးဆကျပှားပွဿနာ ၄၀ရာခိုငျနှုနျးလောကျက အစားအသောကျညံ့ဖငျြးမှုနှငျ့ ဆကျစပျနတေယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။
သုတျပိုးရဲ့ စှမျးရညျကို လှုံ့ဆျောပေးပွီး၊ မြိုးပှားမှုစနဈ၏ အိုမငျးခွငျးကို တားဆီးပေးတဲ့ အငျတီအောကျဆီဒငျ့ကွှယျဝသော အစားအစာမြားကို စားသုံးရပါမယျ။ အသီးနှငျ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျစားသုံးမှုကို တိုးမွှငျ့သော အမြိုးသားတှရေဲ့ သုတျပိုးဟာ ကနျြးမာပွီး အရညျအသှေး သိသိသာသာ တိုးတတျကောငျးမှနျပါတယျ။
မြိုးပှားမှုကို တိုးတတျစတေဲ့ အစားအသောကျမြားအတှကျ အကွံပွုခကျြမြား
အစားအစာအားလုံးဟာ ခန်ဓာကိုယျအပျေါ ရရှေညျအကြိုးသကျရောကျစတေဲ့ အာဟာရမြားပါရှိပါတယျ။ဒီအကွောငျးရငျးတှကွေောငျ့သငျဟာ မြိုးပှားမှုကို တိုးတတျစနေိုငျတဲ့ အစားအစာမြားကို သတိထားသငျ့ပါတယျ။
ဗီတာမငျတှကေ သငျကိုယျဝနျရခငျြတဲ့အခါမှာ မရှိမဖွဈလိုအပျတာကွောငျ့ ဗီတာမငျ တဈခုစီရဲ့ လုပျဆောငျမှုတှကေို အောကျမှာဖျောပွထားပါတယျ။
ဗီတာမငျ ဘီ – အမြိုးသမီးရဲ့ ဟျောမုနျးအဆငျ့တှကေို ညီမြှအောငျကူညီပေးပါတယျ။ ဒါက သန်ဓသားရဲ့ ဦးနှောကျ အာရုံကွောစနဈ ဖှဲ့စညျးခွငျးကို အထောကျအကူပွုပါတယျ။
ဗီတာမငျ စီ – ကိုယျခံစှမျးအားစနဈကို လှုံ့ဆျောပေးတဲ့အပွငျ အမြိုးသမီးမှာ မမြိုးဥ ထုတျလုပျမှုကို တိုးမွှငျပေးပွီး အမြိုးသားမှာ သုတျရညျရဲ့ အရညျအသှေးကို တိုးတတျစပေါတယျ။
ဗီတာမငျ ဒီ – ကိုယျဝနျဆောငျနိုငျစှမျးကို တိုးမွှငျ့စတေဲ့ အငျဆူလငျရဲ့ secretionကို တိုးတတျစပေါတယျ။
ဒီဗီတာမငျတှေ၊ တခွားဗီတာမငျအုပျစုတှကေို အသားမြား၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြားနငျ့ အသီးအနှံမြားမှ သဘာဝအတိုငျး ရယူနိုငျပါတယျ။ ဗီတာမငျခြို့တဲ့မှု ခံစားရလြှငျ ဆရာဝနျတဈဦးဆီက ဖွညျ့စှကျ အကွံပွုခကျြ ရယူနိုငျပါတယျ။
ဖကျတီးအကျဆဈကို အပွာရောငျငါးနငျ့ အခှံမာသီးတှကေလာတဲ့ အိုမီဂါ 3,6 နှငျ့ 9ဆိုပွီး အကွံပွုထားပါတယျ။ အမြိုးသားမှာ သူတို့ဟာ သုတျပိုးကိုအရှယျရောကျစပွေီး အမြိုးသမီးမှာ စိတျဖိစီးမှုနှငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျနှငျ့ဆကျစပျနတေဲ့ စိတျကရြောဂါကို လြော့ခပြေးပါတယျ။
၃။ ဇငျ့နှငျ့ ဆယျလီနီယမျ စားသုံးပါ
အမြိုးသားမှာ ဇငျ့နှငျ့ ဆယျလီနီယမျက ကြားဟျောမုနျးရဲ့ ပမာဏကို တိုးစပေါတယျ။ ရလဒျအဖွဈ သူတို့က သုတျပိုးပမာဏကို တိုးမွှငျပေးပါတယျ။ အမြိုးသမီးတှမှော ဒီသတ်တုဓါတျကငျးမဲ့ခွငျးက ကိုယျဝနျပကျြကမြှုအန်တရာယျကို တိုးစပေါတယျ။ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြား၊ ငါး၊ တူနာ၊ ဆာဒငျး၊ အစမြေ့ားနှငျ့ အခှံမာသီးမြားမှာ ဒီဒွပျစငျကို တှရှေိ့နိုငျပါတယျ။
၄။ ကျောဖီသောကျသုံးမှုကို လြှော့ခပြါ
ကိုယျဝနျရခငျြတယျဆိုရငျ ကျောဖီသောကျသုံးမှုက အန်တရာယျဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ ကိုယျဝနျပကျြကမြှု အန်တရာယျကိုလညျး တိုးစနေိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကျောဖီသောကျခွငျးကို ရှောငျရှားသငျ့ပါတယျ။ ရှောငျဖို့ ခကျခဲတယျဆိုရငျ တဈနကေို့ အမြားဆုံး ၂ခှကျ သောကျသုံးမှုကို လြော့ခပြါ။
အားကစား အသငျ့အတငျ့ ကစားပေးခွငျးက မြိုးဆကျပှားကနျြးမာရေးကို တိုးတတျစတေဲ့ အကြိုးခံစားခှငျ့တှေ ရရှိပါတယျ။
ပြျောရှငျမှုကို ခံစားရစတေဲ့ ဒိုပါမငျဟျောမုနျးအဆငျ့ကို တိုးပှားစတောကွောငျ့ စိတျဖိစီးမှုကို လြော့နညျးစပေါတယျ။
သှေးလညျပတျမှုကို တိုးတတျစပွေီး ဟျောမုနျးတှရဲ့ cellular receptors ကိုလှုံ့ဆျောပေးပါတယျ။
ကွှကျသားနှငျ့ ဟျောမုနျးညီမြှမှုကို ထောကျပံ့ပေးပွီး ဟျောမုနျးတှေ ထုတျလုပျမှုကို တိုးတတျစပေါတယျ။ သားအိမျဆဲလျမြားသားအိမျပွငျပရောကျနတေဲ့ ရောဂါနှငျ့ သားအိမျအလုံးအကြိတျတှရေဲ့ လက်ခဏာကို ထိနျးညှိပေးပါတယျ။
အကဉျြးခြုပျအားဖွငျ့ ဘယျလိုအစားအစာတှကေ မြိုးပှားမှုကို အကြိုးသကျရောကျစသေလဲဆိုတာ သိခွငျးဖွငျ့ အနာဂတျပွဿနာမြားကို တားဆီးနိုငျသလို ကိုယျဝနျဆောငျဖို့အတှကျ ပွငျဆငျထားနိုငျပါတယျ။ အနာဂတျမှာ မိခငျကောငျးတဈယောကျ ဖွဈလာဖို့ ဒီအခကျြလေးတှကေို ဖတျရှုပွီး မြှဝပေေးနိုငျပါတယျ။
အစားအသောက်က မျိုးပွားမှုကို ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်သလဲ? သင်ဘာတွေသိထားသင့်သလဲ?
ကျန်းမာတဲ့ လူနေမှုပုံစံလိုချင်ရင် သင့်ဘဝမှာ အစားအသောက်ကောင်းက အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ကျန်းမာသော အလေ့အထများက အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံးအတွက် ကလေးလိုချင်လာတဲ့အခါမှာ ပိုပြီးအရေးကြီးလာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အစားအသောက်က မျိုးပွားမှုကို ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သလဲ? ဆိုတာသိရှိစေဖို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
အစားအသောက်က အမျိုးသမီးမှာ မျိုးပွားမှုကို ဘယ်လို သက်ရောက်စေသလဲ?
အဝလွန်ခြင်းက မျိုးမပွားမှုကို ဖြစ်စေနိင်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကယ်လိုရီစားသုံးမှု အာဟာရလျှော့နည်းခြင်းတာကလည်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို လျော့ကျစေပါတယ်။ ကိစ္စနှစ်ခုစလုံးမှာ သင့်ရာသီစက်ဝန်းဟာ ကျန်းမာစွာ မျိုးဥထုတ်လုပ်ခြင်းကို သက်ရောက်စေတဲ့အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။
မှန်ကန်တဲ့ အာဟာရစားသုံးမှုက သန္ဓေသားကျန်းမာစွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ ကလးမွေးဖွားလာဖို့ သေချာစေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကျန်းမာသော အစားအသောက်မှတဆင့် မိခင်နှင့်ကလေးအတွက် ကျန်းမာရေးပြဿနာများကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကကိုယ်ဝန်ဆောင် ဘယ်အဆင့်မှာမဆို ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျနိုင်ခြေကို လျော့နည်းစေပါတယ်။
အစားအသောက်က အမျိုးသားမှာ မျိုးပွားမှုကို ဘယ်လိုသက်ရောက်စေသလဲ?
အမျိုးသားမှာ အစားအသောက်က မျိုးပွားမှုကို ကောင်းစွာသက်ရောက်စေပါတယ်။ သုတ်ရည်ရဲ့အရည်အသွေးက အာဟာရမျှတမှုနှင့်အတူ တိုးတတ်လာစေနိုင်ပါတယ်၊ မျိုးဆက်ပွားပြဿနာ ၄၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်က အစားအသောက်ညံ့ဖျင်းမှုနှင့် ဆက်စပ်နေတယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
သုတ်ပိုးရဲ့ စွမ်းရည်ကို လှုံ့ဆော်ပေးပြီး၊ မျိုးပွားမှုစနစ်၏ အိုမင်းခြင်းကို တားဆီးပေးတဲ့ အင်တီအောက်ဆီဒင့်ကြွယ်ဝသော အစားအစာများကို စားသုံးရပါမယ်။ အသီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်စားသုံးမှုကို တိုးမြှင့်သော အမျိုးသားတွေရဲ့ သုတ်ပိုးဟာ ကျန်းမာပြီး အရည်အသွေး သိသိသာသာ တိုးတတ်ကောင်းမွန်ပါတယ်။
မျိုးပွားမှုကို တိုးတတ်စေတဲ့ အစားအသောက်များအတွက် အကြံပြုချက်များ
အစားအစာအားလုံးဟာ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့ အာဟာရများပါရှိပါတယ်။ဒီအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်သင်ဟာ မျိုးပွားမှုကို တိုးတတ်စေနိုင်တဲ့ အစားအစာများကို သတိထားသင့်ပါတယ်။
ဗီတာမင်တွေက သင်ကိုယ်ဝန်ရချင်တဲ့အခါမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာကြောင့် ဗီတာမင် တစ်ခုစီရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
ဗီတာမင် ဘီ – အမျိုးသမီးရဲ့ ဟော်မုန်းအဆင့်တွေကို ညီမျှအောင်ကူညီပေးပါတယ်။ ဒါက သန္ဓသားရဲ့ ဦးနှောက် အာရုံကြောစနစ် ဖွဲ့စည်းခြင်းကို အထောက်အကူပြုပါတယ်။
ဗီတာမင် စီ – ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကို လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့အပြင် အမျိုးသမီးမှာ မမျိုးဥ ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးမြှင်ပေးပြီး အမျိုးသားမှာ သုတ်ရည်ရဲ့ အရည်အသွေးကို တိုးတတ်စေပါတယ်။
ဗီတာမင် ဒီ – ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို တိုးမြှင့်စေတဲ့ အင်ဆူလင်ရဲ့ secretionကို တိုးတတ်စေပါတယ်။
ဒီဗီတာမင်တွေ၊ တခြားဗီတာမင်အုပ်စုတွေကို အသားများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနင့် အသီးအနှံများမှ သဘာဝအတိုင်း ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင်ချို့တဲ့မှု ခံစားရလျှင် ဆရာဝန်တစ်ဦးဆီက ဖြည့်စွက် အကြံပြုချက် ရယူနိုင်ပါတယ်။
ဖက်တီးအက်ဆစ်ကို အပြာရောင်ငါးနင့် အခွံမာသီးတွေကလာတဲ့ အိုမီဂါ 3,6 နှင့် 9ဆိုပြီး အကြံပြုထားပါတယ်။ အမျိုးသားမှာ သူတို့ဟာ သုတ်ပိုးကိုအရွယ်ရောက်စေပြီး အမျိုးသမီးမှာ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ဆက်စပ်နေတဲ့ စိတ်ကျရောဂါကို လျော့ချပေးပါတယ်။
၃။ ဇင့်နှင့် ဆယ်လီနီယမ် စားသုံးပါ
အမျိုးသားမှာ ဇင့်နှင့် ဆယ်လီနီယမ်က ကျားဟော်မုန်းရဲ့ ပမာဏကို တိုးစေပါတယ်။ ရလဒ်အဖြစ် သူတို့က သုတ်ပိုးပမာဏကို တိုးမြှင်ပေးပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဒီသတ္တုဓါတ်ကင်းမဲ့ခြင်းက ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျမှုအန္တရာယ်ကို တိုးစေပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ငါး၊ တူနာ၊ ဆာဒင်း၊ အစေ့များနှင့် အခွံမာသီးများမှာ ဒီဒြပ်စင်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
၄။ ကော်ဖီသောက်သုံးမှုကို လျှော့ချပါ
ကိုယ်ဝန်ရချင်တယ်ဆိုရင် ကော်ဖီသောက်သုံးမှုက အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျမှု အန္တရာယ်ကိုလည်း တိုးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကော်ဖီသောက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ ရှောင်ဖို့ ခက်ခဲတယ်ဆိုရင် တစ်နေ့ကို အများဆုံး ၂ခွက် သောက်သုံးမှုကို လျော့ချပါ။
အားကစား အသင့်အတင့် ကစားပေးခြင်းက မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးကို တိုးတတ်စေတဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်တွေ ရရှိပါတယ်။
ပျော်ရွင်မှုကို ခံစားရစေတဲ့ ဒိုပါမင်ဟော်မုန်းအဆင့်ကို တိုးပွားစေတာကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့နည်းစေပါတယ်။
သွေးလည်ပတ်မှုကို တိုးတတ်စေပြီး ဟော်မုန်းတွရဲ့ cellular receptors ကိုလှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။
ကြွက်သားနှင့် ဟော်မုန်းညီမျှမှုကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး ဟော်မုန်းတွေ ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးတတ်စေပါတယ်။ သားအိမ်ဆဲလ်များသားအိမ်ပြင်ပရောက်နေတဲ့ ရောဂါနှင့် သားအိမ်အလုံးအကျိတ်တွေရဲ့ လက္ခဏာကို ထိန်းညှိပေးပါတယ်။
အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ဘယ်လိုအစားအစာတွေက မျိုးပွားမှုကို အကျိုးသက်ရောက်စေသလဲဆိုတာ သိခြင်းဖြင့် အနာဂတ်ပြဿနာများကို တားဆီးနိုင်သလို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ မိခင်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ ဒီအချက်လေးတွေကို ဖတ်ရှုပြီး မျှဝေပေးနိုင်ပါတယ်။